OromooRevolution : Magaalaa Bishooftuutti Sochiin Warraaqsa FXG
OromooRevolution Guran.13/2018 Magaalaa Bishooftuutti Sochiin Warraaqsa FXG daran jabachuun finiinaa jira, duulli gabaa lagannaa, uggurri geejjibaafi hojii dhaabuun guyyaa #2ffaaf itti fufetti jira
FXG QEERROO Qellem Wallaggaa Qaaqee har’as guyyaa 2ffaaa Lagannaan Gabaa itti fufee jira.
FXG QEERROO Arsii Lixaa DODOLAA guyyaa 2 ffaa Itti muddii jiru.
Sabbataa Naanno finfine baratoni haala akanatti hiriira ademsaa jiru, 13/02/2018
Qeerroowwan oromoo kan guyyaa kaleessaa godina jimmaa keessatti rasaasa woyyaaneetiin haleelaman kunoo jara kana.
Qeerroowwan haala kanaan gola oromiyaa hunda keessatti sababa oromoo ta’n qofaaf rasaasa diinaatiin miidhaan irra gahe hundaaf, waamichi lammiitu maalammiif birmata jedhu akkuma worra barana qehee isaanii irraa buqa’an sanaatti godhameefii biyya keessaaf alaan maalaqni wolitti qabamuufii qaba.
Suuraa jaraa qofa post goonee qeerro qeerroo jennee maas miidiyaa hundaan odeessuun bu’aa hin qabu yoo ilmaan oromoo lafs irraa daguuguu ta’e malee.